MIIDIYAA QOOQA/AFAAN OROMOO FI, SHIRA WAYYAANEE - Ayyaantuu News
MIIDIYAA QOOQA/AFAAN OROMOO FI, SHIRA WAYYAANEE Miidiyaa Qooqa Oromoo fi shira wayyaanee kan jedhu jalatti, barruu kutaa lamaan dhiheesse keessatti, shiroota wayyaanee, sabboonummaa fi sochii keenya dhaloota itti aanuun dagaagaa jiru kana laamsheessuuf gaggeessitu tarrisuun kiyya , ka’umsa barreeffama mata duree har’aaf bu’ura ta’a jedheetanii.
HUMNA WALIIF TA’UU MOO,,, CACCABUUTU FURMAATA ???
Kutaa 3 ffa
Wayyaaneen miidiyaan akka of mul’iftu kanatti hin jirtu . humna ishee dhiibuutu dhibeetu malee, keessi ishee garmalee laafatee jira. Onneen qabsaa’ummaa, maallaqaa fi qabeenyaa horachuun shuntuuree jira. wayyaanee kan Umurii dheeresse, jabiina ishee odoo hin taane, hanqina faallaa ishee warra jiraniin ta’uu eenyullee haalu hin danda’u . kanaan alatti, humnoonnis ta’e Ummati faallaa isheen jiru, humna akka hin taaneef shirri isheen hojjattu , maallaqaanis ta’e humnaan kan gaggeessitu ishee gargaaree jira. Kana malees warra waggaa 20 booda illee irriibaa dammaqu dadhabanii fi ummata isaanii irra, maallaqa caalchifatan jiraachuun dabalataan, umurii akka dheerattu taasisee jira.
Humnoota faallaa ishee jiran jabaachuu dhabuu fi gamtaan ishee falmuu dhiisuu irratti, gara fuula duraatti katabuu yaaluus, wayyaaneen shiroota nu irrattii akka walii galaatti gaggeessitu tarrisee, waan nuuti itti jirrutti haa ce’u. wayyaaneen akkuman kanaan dura barruu adda addaa keessatti ibse,
1. wayyaaneen Dinagdeen ummata cabsitee hirkattu ishee taasisuu akka feetu, keessattu gama Daldalaa , konstiraakishinii ,mi’oota erguu fi fichisiisu, kubbaaniyootaa fi dhaabbilee daldalaa gurguddaa, Albuudoota baasuu fi gurguru kkf. Kanneen saboota harka galuu hin qaban jettee yaaddee hundumaa tu’achuun, humnoota jiran humna dhabsiisuu akka yaalte…
2. Humna waraanaa , Polisaa , Tikaa , Siyaasaa fi Bulchiinsaa hunda tu’achuu akka barbaaddu
3. Lammiilee TIGIRAAYI FI WARRA ISHEE WALIIN DHAABATANIIN ala kan jiru hundumaa boodatti hafummaa keessatti kuffisanii ajajaa jiraachuu akka barbaadan,
4. Ummatoonni Eenyummaa isaaniin boonanii akka hin jiraanneef, sabboonummaa balleessuuf , humna addaa ijaartee shiroota eenyummaa sabootaa balleessuu hojjachaa akka jirtu,
5. Akka walii galaatti, wayyaaneen Umurii ishee dheeressuuf, eenyummaa sabootaa dhabamsiisuu kan jedhu, imaammata duguugiinsa dhala namaa irraa adda hin taane gaggeessaa akka jirtu addatti ammo, saboonni mirga isaanii fi Biyya isaaniif akka hin falmanneef, humnoota alaa sababaa gara garaan seensiftee(maqaa investimantiin) gaaffiin Ummatootaa dhageetii akka hin argannee taasisuuf akka yaaltu ibsuun kiyya ni yaadatama.
Qabxiilee kana bal’isee kan ilaaleef baayyee bal’aadha. Shiroota wayyaanee jiraachuuf jedhanii baafatan keessaa, shirri miidiyaa keenya irratti hojjatamu isa tokkodha. Kana hundumaa walitti qabnee haala keenya waliin ilaaluutu gaarii ta’a .
shirri wayyaanee daran hammaatee kan itti fufu ta’uu , keessa beektoonni ergaa dabarsaa jiraachuu fi waan nu irratti hojjatamu kana of irraa dhaabuuf gama keenyaan kan jiru wayitan ilaalu,(shiruma miidiyaa qofaan yoo ilaallee)humna tokko ta’anii miidiyaa babal’ifachuu ykn qopha – qophaayyuu ta’anii, wayyaanee irratti xiyyeeffachuu odoo hin taane, beekaas ta’u odoo hin beeknee ,shira wayyaanee milkeessaa jiraachuu keenyatu natti mul’ataa jira.( kan jechuun wal fudhannee badaa jirra jechuu kiyya miti. isa keessaa sirreeffachuuf yaalaa, wayyaanee kan irriba dhabsiisaa jiran jiru)
yeroo ammaa kana, Miidiyaa Qooqa Oromoon hojjatan Biyya keessaa fi alaa hedduu qabna . hundinuu Qooqa Oromoon tamsaasu. Kan Biyya keessaa haallii Ummata Oromoo keessa jiru qabatamaan kan gabaasaa jiru hin jiru.kan jiru hundumtu sirnichaaf baabsa . sirnichaaf baabsuu qofaa odoo hin taane, eenyummaa Abbaa Qooqichaa dhabamsiisuuf tajaajilaa jira. Kana irratti yeroo eeggannee itti deebina.
Kan Biyyoota alaa tamsa’anitti haa deebinu. Kan guutummaatti wayyaanee irratti hoojjatan ni jiru. Kan guutummaatti wayyaanee irratti hin hojjatiin jiru. Kan guutummaatti , of irratti ykn wal irratti hojjataa jiraatan ni jiru. Kan wayyaaneef amma tokko dubbachaa, Ummatichaafis hojjatan ni jiran. Kan hundeen saba tokko siyaasaa fi eenyummaa isaa Biyya isaa irratti kabachiisuu ta’uu odoo beekanii, Ummatichu ciraa lafa irraa dhabamsiisamuuf yaalamaa odoo jiru, callisanii seenaa fi waan Ummatichaa ibsaama jiraatanis ni jiran.
Miidiyaaleen Qooqa Oromoo Biyya Ambaa jiran, Ummata bira ga’uuf ykn humna qaban yoo ilaallee, Sagalee bilisummaa Oromoo , VOA Raadiyoon tamsa’an qofaatu , akka Raadiyootti Ummata bira ga’uuf humna qaban. Gama TVn , Qophii Gaaddisa dhugaa TV Ertiraa irraa tamsa’u qofaatu jira. Warra kana sadantu Ummata Biyya keessaa fi alaa harka 80 waan tokko akka dhaga’an taasisa. Kana irraa kan hafan, Raadiyooleen Hawaasaa lakkoofsaan kaa’uu hin dandeenye bakkayyu ni jiran . isaanu amalaa fi fedhii warra isaan qopheessaniin gaggeeffamu malee, dantaa Ummatichaa irratti hin hundaa’an. kun yaada Hawaasa Oromoo Biyyoota alaa hedduuti.
Kana irraa kan hafe, harki 80n Intarneeta irra kan jirudha. Raadiyoo Intarneetaan dhaga’amuu fi web-saayitii adda addaan kan faca’u . bifa barruuleenis ni jiru. Kanaan ala, Intarneeta kanaan aadaa , Qooqa , seenaa kkf warri barsiisaa jiraanii fi addunyaatti beeksisaa jiran ni jiran. Kana hundaa keessa odoo hin seenne, waan amma lubbutti nu qabaa jiru wayyaaneen wal qabsiisnee ilaalaa haa deemnu. Isa dura garuu, sabummaa isaaniif kanneen kaka’umsa mataa isaaniin hojjatan hundumaaf galata galchuun aadaadha.
Haa ta’uuti, Miidiyaalee qabna jennee dubbannu ykn tarrifnu kanaa fi sochii wayyaanee wal bira qabnee yennaa ilaallu ykn miidiyaalee qabnuu fi baroota gabrummaa keessa turre yennaa ilaallu, waan nu qaanfachiisu hedduutuu jira yaa firaa !!!!!!!!!!!!!! hayyee, mee waanuama qabnu kana iyyuu haa galateeffannuti, miiidyaaleen kun haala itti jiran haa ilaallu. Bu’aa siyaasa keenyaaf qaban ilaaluuf. SBO , GAADDISA DHUGAA FI VOA irraa kan hafe, hundumtu Intarneetaan wal qabata. Kun ammo carraan itti fayyadamu irra jireessa Biyya alaa kan jiruufidha. Isayyuu akka tasaa ykn dhimma koo jedhee kan hordofu qofaa.
Kana irratti amaloota miidiyaalee Intarneeta irratti hundaa’anii kana yenna ilaallu, kan tokkummaaf nu qajeelchu irra, kan qopha-galeessummaaf nama afeerutu heddummaata. Waan keessa keenyaa hundumaa halgaan qixxee keenya akka dubbisu taasifama. Aarii yeroo ykn jibba dhuunfaa irratti hundaa’uun , yennaa dirree irratti wal quncifnu dhaga’aa jiraanne . keessattu waggaa 10 asi. Kana jechuun ammo , shira wayyaanee milkeessuf qofaa ta’a.
Bifa web-saayitiin kanneen maxxanfaman yoo ilallees, kan of ajjeessaa jiru akkuma jiru, kan amma danda’etti sabichaaf hojjatu inuma jira. Kun rakkoon isaa Ummata bal’aa bira ga’uu hanqachuu isaati. Hanqachuu isaattis kan gammadan ni jiru. Duula wal-irraa kun ummata Biyya keessaa bira akka hin geenye. Kana keessaa ammo waanuama barreefamus, waanuma Oromoo keessatti gaggeeffamus, arrabsoo safuu keenya cabsu hundumaa kan callisee maxxansus ni jira. Fuula duraa irratti gootoota kaleessaa faarsee, fuula keessaa irratti ammo, Hogganoota har’aa kan salphisuus ni jira.
Miidiyaan kaleessa warra adda ba’e faarfatee, har’a bakka jiranii yennaa dhabamanis arrabsee, isa bakka sanatti ciches arrabsee, yoo itti toles jajee waan mataa fi miila hin qabne, sabummaan itti hin dhaga’amnes inuma jira. Irra jireessi Intarneetaa waan akka waan wayyaanee achi irratti hin mal’anneetti amananii , duula walirratti qofaa hordofanii kanneen maxxansaa oolanis ni jiru. Akka dhuunfattis web-saayitii mataa isaanii banatanii waanuma ummatichaa dubbachaa kan jiraatan akkuma jiran, kan walitti bu’iinsi qabsaa’oota keenya gidduu akka babal’atu taasisaa kan jiraatanis ni jiru. Kana caalaa waan taajjabne kaasuu dandeenya. Garuu of abaaru ta’a.
Mee gara gargaaramtoota miidiyaalee kanaatti haa deebinu. Namoonni siyaasaa keenyas, beektoonni keenyas, ….. ni kataban . katabbii isaanii kana yoo ilaallee irra jireessi katabbii kanaa, beektootaa fi qabsaa’oota Qabsoo kana bu’ureessaniin katabaman ni jiru.dhalootaaf maal dabarsaa jiru ? yoo jennes, bu’aansaa halagaaf ta’uu kan wallaalu hin jiru. Mata duree keenya waliin haadeemnuuti, isa kaan dhiifne, wayyaanee irratti kan katabamu , harka 100 keessaa 5% hin ta’u . harki 95% wal irratti katabama . kun shira eenyu milkeessaa akka jirru nutti argisiisa. Wanni hin haalamne waggoota 5 asi fooyyee qabaachuu danda’a.
Yeroo tokko tokko abbootiin intarneetaa kun odoo warra gara keessaatti qofa cillaafatu kana irratti qoqqobbii dabarsanii, hundumtu wayyaanee irratti xiyyeeffatee gara yaada tokkotti luucca’uu hin danda’uu laata ? jedheen yaada. kana irraa kan hafe ammo , warrumtu maqaa Intarneetaanis ta’uu , Raadiyoo hawaasaa jedhee miidiyaa Qooqa Oromoo xiqqoos banu kun, qopha –qophaa, tokkummaa , tokkummaa Jecha oolu irra, miidiyaa guddaa Oromoon YAADA TOKKO qofaa itti dhaga’u ummachuu hin danda’anii laata ? jedhees nan yaada . dhugaa waaqaa . dammaqu dhabuu keenya malee, ni danda’amaama ?
Sammuun, ebaluu dadhabsuuf Raadiyoo akkasii gargaarsa akkasiin banachuun qaba jedhee waan nyaatuu fi dhugu irraa kaasee itti dhangalaasu, akkamiin kan OROMOO jedhee yaadu dadhabaa ? sammuu siyaasaa Addunyaanu ragaa nuu baatu qabaannee, miidiyaa Ummata alaa siyaasi biyya keessaa yaaseef babal’isuu moo, Ummata Biyya keessaa shira wayyaaneen miidhamaa jiruuf dhaqabuutu beekumsa keenya ibsa ? miidiyaa jiru cimsinee wayyaanee dura dhaabbachuu moo, humna wal hannee yeroof intarneeta irratti haasa’uutu , shira wayyaanee sa’a 24 dhaabaa ?
Gama biroon, bifa Qorannoon waa’een Oromoo dhihaachuun gaarii ta’ee, eenyummaan Oromoo wayita wayyaaneen badu, deeggarsa gochuu dhabuun hedduu nama raaja. Wanni qoratanii fi kataban Ummata kana bira hin ga’u yoo ta’e, inni qoratees Biyyuma alaa taa’ee katabee , katabee dulloomee Biyyuma alaatti yoo awwaalame bu’aan maalii ? katabamee taa’uu isaatii ? waan katabame sana Ummata gabrummaa jala jiru barsiisuuf yoo hin carraaqine, Qabsoo keessatti qooda yoo hin fudhannee, maaliif dhamaana ? Beektoonni Biyyoota biro Bilisummaa Biyya isaaniif kan fidan qabsoo akkasinii ? wayyaaneen warra qaroo Biyyaa baasuun , gaaffii Ummata keessaa qabbaneessutti akka fudhatamu odoo beekamuu, warra alatti yaa’uu waa’eema Oromoo dubbachaama akka hafu taasiisuun kun, waggoota gabrummaa dheeressuun ala maal fayyade ? shiroota wayyaanee dhaloota tokko guutummaatti dhabaa jirru baraaruuf maal fayyade ?
Miidiyaaleen Biyyoota alaa kun faayidaa hin qaban jechuu odoo hin taane, miidiyaalee kana irra warri hojjatan , sochiilee Ummata kana laamsheessuuf taasifamu hundumaa odoo of irraa dhaabanii , shira wayyaanee laaffisuu keessatti qooda ni qabaatu jedheen amana. Akka amma jirrun garuu, shira wayyaanee milkeessaa jiru. Sirna Gadaa Dimokiraatawaa qabna yoo jenna ta’e, Ilaalcha jiru keessummeessu danda’uu qabna. Aadaa , safuu qabna jennee itti amanna yoo ta’e, eenyullee ta’u, Hogganoonni qabsoo kamu kabajamuu qabu. Wal kabajuus qaba. Kabachiisuus qabna. Akka wal kabajan illee itti himuu qabna . dhaloota itti aanutti dabruu hin qabu jechuu qabna . dhalota dhumaa jiru hamilee hin cabsiinaa jechuu qabna. Dhaabni Oromoo kamuu dhaabbatu bu’aa Ummata Oromoof buusuun madaalamu qaba malee, wal irratti duulanii , hawwii wayyaanee milkeessuun akka hin taane barsiisuu gaafata. yeroo itti himnu fi walittis himan sirreessuu ykn edit gochuu qabna. Kun mataan isaa ogummaa kana kabachiisuu ta’a. yoo ta’uu baate nus, shiruma wayyaanee milkeessina.
Dhaaboonni Oromoo heddummaachuu fi akkaataa nama qaaneessun maqaa wal harkatti qabuun waan biraati. Dhimmi oromoo inni bu’urri waan birooti. Dhimma OROMOO dursina taanaan , waan wal dhabnuuf hin qabnu. Ogummaan keenyas dhimma OROMOO irratti hundoofnaan dhimma amma wal galchuu dadhabe sirressu nu dhibuuf hin jiru.
Dubbiftootaa , ani shira wayyaanee nu irratti gaggeeffamuu fi shira nu irratti gaggeeffamu kana dura dhaabbachuuf miiidyaa qabnu irraa ka’ee yaada kana dhiheesse malee, miidiyaaleen jabiinaan hojjatan, wayyaanee irratti halkanii fi guyyaa hojjatan jiraachuu naa qalbeeffadhaa. Kan hojjatuun jabaadhuun ammaaf ni ga’a. garuu diina nu dura jiru waliin yennaa madaalluu fi humna keenya qabsoo keenyaa walitti gamteessuuf miidiyaan shoora mataa isaa taphachuu akka danda’u qalbeeffachuun dansaadha. Tokkummaan hojiin qofa dhufa. Ykn ta’anii argamuu qofaan dhufa.
“Tokkummaan humna” jechaa , dhalootas barsiisaa Qophaatti baane jechuun maalii ?Tokkummaan human jechaa miidiyaa ofii banachuuf arreeduuni fi humna obboleessaa dadhabsuuf yaaluun akkamiin wal sima ? Miidiyaa shira wayyaanee dura dhaabbatu, OROMOOF dubbatu , hunda keenya hammatu, hunda keenya keessummeessu, madda intarneetaas ta’e kan biro ta’u, TV , RAADIYOO OROMOO dhaabu hin dandeenyu ? silaa sirni GADAA kana nu hayyama ture. yoo kun ta’uu baate ammo, isuma ganamaa sana jadeessinee hunda keenyaaf taasisu hin dandeenyu ?????????????? Dhaamsa :-haallii amma Qabsoon Oromoo keessa jiru,abdii nu kutachiisu hin qabu. Kana keessa odoo hin dabarre ykn barnoota irraa fudhannee hin sirroofnee eessayyu hin geenyu . amma dirqamni keenya rakkoon keenya kun babal’achu irra akka dhiphatu taasisu irratti hojjachuudha. Kun ammo warri waa irraa hubate qabsocha jabeessaa deemu qofaadha. Keessattu Xiqqaattus kanneen miidiyaa bifa kamiitu qaban, waan Qabsoo fi Qabsaa’oota walirraa fageessu dhaabani waan ijaaraa qofa maxxansuu ykn tamsaasu eegalanii waan hundi ni sirraa’a. rakkoo jira jedhamu hundaa bifa mariin itti haa fufamu. Yeroon hundi keenya itti wal mararfannu ni dhufa. Kan dhufu ammo waan wal miidhaa jirru irraa yoo barannedha. Kanaaf miidiyaa Oromoo kamu irra kan hojjattan mee waan rakkoo keenya babal’isu irraa fagaannee , kanneen qabsoo sabichaaf gumaacha taasisan haa jajjabeessinun jedha.
Gabrummaa jalatti waggaa 130 ol dabarsine. Gabrummaa kana of irraa kaasuuf ,Ummati waggoota gabrummaa jala ture kana maraa, bifa gara garaan falmataa jiraate. Qabsoo bifa akkasiin gaggeeffamu xumura itti gochuuf, Qabsoon hidhannoo barbaachisaa ta’uun itti amanamee, bifa dhaabaan ega sochiin eegalee , waggaa 40tti hiiqaa jira.
Gabrummaa keessaa ba’uuf , Qabsoo akkamii akka adeemsiifamu fi carraaqiin barbaachisu Ummata ykn Nama waggaa 150 oliif gabrummaan waadametti himuun nama saalfachiisa. Wallaalaa keenya dhiifnee , kan waa dubbisee ykn waa dhaga’ee hubatu qofti, warri gabrummaa jala turan akkaataa keessaa itti ba’an ,waan dhaga’an ykn dubbisan ykn daawwatan san, Qabsoo Ummata keenyaafis barbaachiisaadha jedhanii maaliif, dirqamuma lammummaa irraa ka’anii , qooda mataasaanii maaliif akka hin baane naaf hin galu.
Hawaasa Oromoo Biyyoota hanbaa keessa jiran keessaa harka 90 ol, sababaa Siyaasaan kan Biyya keessaa ba’aniidha. Namni Biyya Abbaa isaa irraa haala gaddisiisaan ari’amu ammoo , humna isa ari’e san kaasee Biyyatti deebi’ee qe’e warra isaa irra jiraachuu akka qabu walitti himuun taajjabbii ta’a. har’a beektoota keenya meeqatu Biyya hanbaa jira ? dureessa meeqa qabna ? Hayyoota rakkoo addunyaa kanaa furu keessatti ga’ee ol aanaa qaban meeqa qabna ? Ogeessitoota waldhaansaa , Qonnaa , aadaa , Afaanii , barnootaa , Gaazexessummaa , Waraanaa, Dippolomaatoota, Piroofesaroota haala addunyaa keenyaa furmaata isaa waliin tarrisuu danda’an, kkf meeqaa Biyya alaa keessaa qabna ?
Addatti Namoota siyaasaa warra kaan illee gorsan meeqa qabna ? ogeessitoota waraanaa addunyaan ajaa’ibsiifattu, saayintistootaa fi piroofesaroota addunyaan , addatti hawaasi Biyya hanbaa dinqisiifatan meeqa qabna ? odoo ni lakkoofna jennee yeroonu nu hin ga’u . maarree beektoonni keenya kunniin , haalli Ummati isaanii keessa jiran ni wallaalu jedhee hin yaadu . kan na yaaddessu, maaliif qabsoo Ummatichaa irraa fagaatanii kan namaa dinqisiifataa jiraatu ? kan jedhudha.
Kan sirbaanis ta’ee gorsuma beektoota keenyaan dhaga’a guddanne, “kan barateetu Bilisummaa gaafataa. Furmaatas argamsiisaa ” kan jedhu mitii ? Beektoonni keenyas ta’u dureessitoonni keenya amma yoomitti waan maraa irraa of moggeessanii jiraachuu filatan? Addunyaan rakkoo keessaa fi gufuulee meeqaantama keessa dabranii akka milkaa’an osoo beekanii , maaliif kan isaanii irratti dadhabuu fi rakkoo dandamatanii keessa dabruu dadhaban? ?
Maaliif waan qabsoo saba isaaniif gumaacha ol aanaa ta’uu danda’an irratti maaliif hin hirmaatan ? waan biraa dhiifnee , itti fayyadama miidiyaa irratti hawaasa keenya isa kaan waliin yoo madaalle waan nu qaanfachiisuu hedduu agarra. Warri kaan namoota muraasa ta’anii Sadarkaa TV banachuu wayita ga’an , keenya garuu waan kaasinu dhabnee of keessatti gubachuu irraa kan hafe waallee jechuu hin dandeenyu.
Addunyaa akka barruu harkaatti of ilaalaa jirtu keesstti , waa’ee Qabsoo fi Ummata keenyaa addunyaatti beeksiisu keessatti miidiyaan bakka ol aanaa qabaachuu osoo beeknu , har’a Ogummaa fi beekumsa keenya, Dinagdee qabnuun walitti qindeessinee waa ummachuu dhadhabuun keenya, yeroo gabrummaa keessa turre waliin yennaa ilaallu nu qaanfachiisa. Warri har’a qabsoo isaaniin injifannoo galmeessisan , umurii hangamiif akka falmatan inuma beekna. Miidiyaa akkamii qabaatanii Ummata isaanii akka dammaqisan inuma beekna. Keenyawoo ?
Humni fi beekumsi Biyya ambaa keessa jigee jiru yoom walitti dhufee , qabsoo saba isaaf gumaacha taasisuu eegala ? har’a hundumtu Intarneeta irratti waan itti mul’ate katabuu fi argisiisuun eessaan nama ga’a ? isuma iyyuu ta’ee , dhimma keenya addunyaatti dhageesifachuu irra , wal hamachuun kun eessaan nu ga’a ? humna tokko dhaabbatanii diina waloo irratti xiyyeeffachuu irra, yaada halagaa bakkaan ga’uu fi mul’achuuf jecha hanga yoomitti kottee halagaa jala eegee raafna ?
Hawaasi Oromoo Biyya alaa keessa jiru , miidiyaa xixiqqaa Ummaticha waliin hin geenye fi humna ga’aa hin qabne , akkasumas, maqaa Ummaticha bal’aa kana hin ibsine moggaafannee amma yoomitti joorree wal joorsina ? Maqaa Oromoon ykn Oromomiyaan maaliif TV ogeessitoota keenya bakka jiranii walitti fidne hojjannee miidhaa ummata keenyaa addunyaatti hin baafnu ? wayyaaneen sa’’a 24 Ummata keenya irratti shirri karaa midiyaa hojjattu salphaa miti . maarree Ummata keenya haala hammaataa kana keessaa baasuuf kan nu gargaaru Midiyaa TV,RAADIYOO , INTARNEETAA , GAAZEXAA , BARRUULEE JAJJABAA qabaachuu hin dandeenyu ? yoo xiqqaate , baduu keenyaan dura, SBO BAL’IFNEE UMMATA KEENYA HOLOLA DIINAAN RAKKACHAA JIRU MAAF HIN BARAARRU ?????
Keessattu yeroo ammaa kana Ummata Oromoo adda diiguuf shirri Dolaara biliyoonaan irratti dhagala’ee gaggeeffamaa jiru kanatti, Ummata keenya dandamachiisuun dirqama oromummaan nu irraa eeggattu mitii ? Namoonni bebbeekamoon, Hayyoonni , Namoonni siyaasaa keenya waan kana dhaabuuf humna Dingdee isaan barbaachisu , haala mijeessuu ni dadhabuu ? maalif irratti hin hojjannu ? Oromiyaa fi Oromoon haala yaaddeessaa keessa jiraachu hubannee, garaagarummaa jirtu dhiifnee Ummata kana baraaruuf maaliif wal hin tumsinu ? wayyaaneen Ummata Biyya keessaa holola ishee umama keenya balleessuu sa’a 24 irratti lallabaa , Biyya alaati miidiyaalee yeroo gaggabaabduuf Ummata bira geessu irratti cufuuf humna qabeenyaa keenyaan maal hojjachaa akka jirtu haalaan daawwachaa jirra miti ? falli isaas maal akka ta’e ifatti odoo beekamuu , Umurii keenya guutu Biyya faranji keessatti fixinee dabruu feena yoo ta’e , qalbiin nu hiri’achu nutti mul’isa. Mee jarana kana irratti haa hojjannu . deeggarsa barbaachisu taasisuuf of haa kenninu .
Mee ilaalaa yaa firaa , Humna namaa fi beekumsa akkasumas Dinagdee biyya alaa qabnu , yaada kanaaf murteessaa ta’anis, bara wayyaane kana qofa , Gaazexessitoonni TV itoophiyaa , TV Oromiyaa , Raadiyoo Itoophiyaa , Raadiyoo Oromiyaa , meeshaalee sab-quunnamtii wajjiraalee gara garaa irra hojjataa turaniifi Gaazexaa dhufaa hojjachaa turan 200 ol Biyya alaa keessa jirra. Ogummaa kanaan dhimma ummata keenyaa hojjachaa kan jirru seenaan haa ibsuuti, bakkuma jiraannu teenye teekinolojii Addunya kanaan waliif dabarsinee waa hedduu hojjachuun ni danda’amaa haa tattaffanu . nuuti eenyun illee gadi miti. Xiiqii dhabuu keenyaan garuu eenyun illee gadidha. Amma yoomitti Umata keenyaa Biyya keessaa qabeenyaa fi qe’ee isaa saamamee addaggeen ari’atamu simataa jiraanna ? amma yoomitti ????????????? caccabuu odoo hin taanee, humna waliif ta’uutu, shira wayyaanee dhaabuu danda’a. xumure .
–MIIDIYAA QOOQA(AFAAN) OROMOO FI SHIRA WAYYAANEE – Kutaa 2ffa – Bilisummaa.com
–MIIDIYAA QOOQA(AFAAN) OROMOO FI SHIRA WAYYAANEE – Kutaa 1ffa – Bilisummaa.com
Be the first to comment - What do you think? Posted by admin - 11/06/2012 at 4:27 pm Categories: